Rom-boay – Blaogin'i Voniary
« Kambana mirahavavy no naterany. Voalaza fa mitondra ozona ny fiterahana kambana ka tsy afaka hitaiza antsika izy mivady » P 133
Ny olona manapa-kevitra ny tsy hanaraka izay didian’ny fiarahamonina dia mivonona hisedra ilay antsoina hoe “rom-boay: izay mahasahy, homana !”. Asakasak’izay mankahatra fomba fa izy no hizaka ny tsiny sy hivesaran’ny ozona ary hailiky ny fiarahamonina.
Ny tantara dia mihodina eo amin’ny fiainan’ny zaza roa kambana niaingan’ ny tsy fankatoavana fomba, tsy mivantana. Noezahina nafenina, mantsy, ny fisian’ny zaza iray, saingy niseho masoandro ihany ny marina taty amin’ny fahatanorany. Antambahoaka ireo kambana mirahavavy ireo; teraka tao amin’ny fiarahamonina mandà ny fitaizana kambana. Ny voalohany : tafajanona teo anivon’ny ray aman-dreniny, niaina sy notaizana tao anatin’ny fanajana ilay fiarahamonina. Nino rahateo izy fa noho ny maha kambana azy no tsy nahitan’ny ankohonana nisy azy fahombiazam-piainana. Ny faharoa kosa, notaizan’ny fianakaviana vahiny izay nanangana azy tany am-pitan’ny ranomasina; nandia fomba fiaina tandrefana sy fianarana ambony. Tsy noeritreretiny loatra izay ho vokatry ny fikirizany hitady ny rahavaviny sy ny loharano nipoirany, rehefa fantany ny maha kambana azy taty aoriana. Tanteraka ny fifankahitana ary nifanitsy indrindra tamin’ny fanaovana ny Sambatra Mananjary, fotoana mampahafana ny firaiketana amin’ny fomba. Ho an’ireo teo an-toerana : teraka ny fikorontanana teo amin’ny fifandraisan’ny samy mpianakavy sy teo amin’ny fiarahamonina; nipoitra ny fifandrirotana ; ankilany ny fahatahorana ny fomba, andaniny, ny antson’ny rà iombonana. Ho an’ilay avy any ivelany : nampitolefika azy ny fahadisoam-panantenana sy ny fiheverana ho nariana fanindroany, tsy hainy novinavinaina ny elanelana eo amin’ny tontolo iainany sy izay iainan’ilay rahavaviny. Nahatsiaro ho very teo anelanelan’ny fianakaviany roa izy. Ho an’ny roa tonta, : maharary ny faharovitana eo amin’ny ankohonana iray sy amin’ny maha olombelona ary mivandravandra ny zon’ny zaza sy ny zon’olombelona tsy voahaja.
Tsy antony finoana sy fomba ihany no asehon’ny tantara ho niavian’izay zo tsy voahaja izay. Tany amin’ny firenen-kafa, tao anatin’ny vanim-potoana iray, antony ara-toekarena sy fitantanam-panjakana no nanaovana amboletra hamerana ny isan-jaza ateraka ho tokana. Nisy aina, nisy zaza tsy nomena zo ho teraka ka nongotana an-tery raha mbola tao am-bohoka. Nisy aina, nisy zaza tsy nomena zo ho velona na dia teraka soa aman-tsara aza ka novonoina satria tsy nanara-dalàna, saronana amin’ny hoe “fandrindram-piterahana”; tsy nanontaniana akory izay safidin’ny ray aman-dreny.
Miohatra amin’ny fahatahorana atsindrin’ny fiarahamonina, manoloana izay mety ho fahateren’ny fitantanam-panjakana sy izay mety ho antony hafa ivelan’ireo, moa tsy ambony lavitra va ny fanajana ny zo maha olona; moa tsy masina va ny fanajana ny aina sy ny fianakaviana ? Hiandry fotsiny izay fitsokan’ny rivo-piovana sy fanovana toy izay nisy tany Fanivelona, araka ny voalazan’ity tantara ity, va ny olona mahalala ? Hiandry fotsiny ny fahasahian’izay vonona hiaro ny zo amam-pahalalahany va ny olona mahafantatra, tahaka ireo tanora roa Antambahoaka, kambana ny iray, natroatran’ny herin’ny fitiavany ? Hiandry hatrany ny firotsahan’ny fandaharanasan’ny firenena mikambana hampanaja ny zon’ny zaza sy ny zon’olombelona toy izay nisy tany Fanivelona sy Mananjary va ny olo-manana andraikitra ?
Fa ananan-trosa ny mpanoratra, ananan-trosa ny mpandinika, ananan-trosa ny mpiara-belona sy ny manana andraikitra raha mbola mitoetra ny teny fihaikana sy fanamby hoe : “Rom-boay : izay mahasahy, homana !”
fady mitaiza kambana, fomba malagasy, maha-malagasy, sambatra, sambatra mananjary, zaza kambana, zon'olombelona